2 Siyaabaha dayactir
> Resource > Utility > maqan Operating System? 2 Siyaabaha waxaa dayactir!
I caawi! La'yahay Operating System in Windows!
Run ahaantii ma noqon karaa mid aad looga xumaado badan tan: marka fadhiya hore ee computer ka iyo waxa ay bilaabaan, waxaa dib waxaad fariin ku leh "nidaamka maqan hawlgalka" ama "nidaamka qalliinka lagama helin" on boot . Sababaha khaladaad tani waa drive adag kharribmay, record Boot waxaa corrpted, BIOS ma ogaan disk adag, maqan ama command.con kharribeen, jeermiska fayraska, iwm
Waxaa dayactir, iyo waxaad ka heli doontaa nidaamka hawl gal noqon doonaa mid caadi ah.
2 xal u fudud in ay dib u helaan nidaamka qalliinka maqan aad
Waxaad hagaajin karo ka hawlgala dhibaatadan ka maqan nidaamka si fudud oo effortlessly keligaa la Windows OS DVD (Windows 7, Vista iyo XP). Haddii aadan haysan Windows OS DVD, weli waxaan hayaa xal kale oo aad u.
Xalka 1. Fix la Windows OS DVD
1. Geli Windows OS DVD on your computer.
2. Riix furaha marka waxa laga codsanayaa inay aad ah (in ay kabaha ka DVD).
3. Markaas dooran "Dayactir your computer", ma "hadda rakib", taas ku xasuusan karto.
4. Dooro nidaamka qalliinka ka dib markii baaritaan rakibayo for Windows rakibo, oo guji "Next".
5. Markaas riix "xawaaladaha Repair". Waxaa si toos ah u hagaajin doonaa dhibaatooyinka ka hor Windows ka bilaabo.
Solution2. Waxaa dayactir la Downlaods disk / USB
Haddii aadan haysan Windows OS DVD, oo aan lahayn qorshe ku qaataan boqolaal doolar ku yaal, oo aad qaadi karto sidatan. Helitaanka disk ah Downlaods ama USB aad u xallin kartaa dhibaato. Wondershare Liveboot CD / USB noqon kartaa dookh fiican u yahay waxaad dayactiro nidaamka qalliinka taas arrinta ka maqan si nabad ah oo si buuxda. Oo more tartan ka jaban, marka la barbar dhigo DVD Windows ah.
1. In la abuuro CD ah Downlaods ama USB drive la Wondershare LiveBoot 2012. Geli CD maran ama USB drive galay computer iyo ordi LiveBoot Wondershare ah. Dooro hage ee ahaa abuuridda Downlaods CD ama USB drive sida aad looga baahan yahay. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u qabtaan click ku badhanka gubanaya ee xarunta.
2. Geli LiveBoot CD Downlaods ama USB galay your computer, ka dibna la bilaabi F12 computer iyo saxaafadda si aad u hesho Menu Boot ah. Dooro CD-ROM Drive USB iyo wadi. Markaas dooran "Boot ka LiveBoot".
3. Ka dib marka aad gasho nidaamka, LiveBoot si toos ah bilaabi doonaa. Dooro "Windows Recovery" tab ugu sareeya oo ka dhacay "Boot Shil Xalka" on menu saxda ah. In qayb ka mid ah "Nooca fariimaha baadi A", waxaad arki doontaa "ka maqan nidaamka qalliinka" ee No. 5.
4. Sababta ugu weyn ee sababta nidaamka qalliinka ka maqan yahay sababta oo ah dhaawac ah MBR, si ay qaataan habka 1 sida tilmaamaha ay u dhiso.
Haddii habkan ma shaqeeyaan, ordaya jeeg disk a si uu u xaliyo qaybaha xun oo saameyn ku yeelan doono nidaamka faylasha aad loading, ama ordaya bootsect amarka amarka degdeg ah si ay u cusboonaysiiyaan shil boot. Haddii waxyaalahan oo dhan waa waxtar leh, nidaamka qalliinka waa in lagu waxyeelo dilaaga ah, iyo in aad qaadato mid ka mid ah la soo dhaafay in ay dib aad Windows iyo Office. Ma ahan, LiveBoot waxay kaa caawin kartaa in aad dib u hanato muhiim ah Xafiiska iyo Windows CD muhiimka ah ka mid ah in qayb ka mid ah "Password & Key Finder", ma dheeraad ah qiimaha lacagta.
Kabsado xogta ka "Operation System maqan yahay" computer la Wondeshare LiveBoot CD / USB
Haddii aad u cabsi waayaan files muhiim ah oo ku saabsan "System Operation maqan yahay" computer, Wondershare Liveboot CD / USB ayaa sidoo kale soo kaban karto, xogta laga computer in aad.
Ka dib markii ay soo lifaaqaaya / CD ah USB la your computer oo bilaabeyna Liveboot Wondershare, waxaad dooran kartaa "Data Recovery" doorasho uu furmo.
Markaas barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu / drives on your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay baadhaan, ka dibna dooro files aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado ka dib markii iskaanka.
Waxaad si fiican u isticmaali lahaa qalab cusub oo lagu kaydiyo si ay u badbaadiyo, xogta soo kabsaday. Sababtoo ah files ma laga heli karaa haddii aad iyaga ku badbaadin on Liveboot CD / USB
Hotmail Password Cracker: Sida loo crack / Hack Your Hotmail Passwords
Sida loo dayactir Khaladaadka Screen Vista Blue
Beddelaan NTFS in baruurta Waxaad u Loss Data aan